Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » आज बुवाको मुख हेर्ने दिन : किन पूज्य छन् पिता ?
आज बुवाको मुख हेर्ने दिन : किन पूज्य छन् पिता ?
आफ्नो सन्तानलाई ताते-ताते गरेर हिँड्न सिकाउन, यो संसारका हरेक नयाँ चिजहरुसँग घुलमिल गराउन, उनीहरुलाई सही मार्गमा लैजान र सन्तानका आवश्यकतालाई आफ्नोभन्दा पहिलो प्रथमिकता दिएर पूरा गराउन सधैं आमाबुवाले प्रयास गरिरहन्छन् । सन्तान जति नै भए पनि आफ्ना बुवाआमाको लागि सबै सधैं प्रीय रहन्छन् । छोरा छोरीको पालन पोषण देखि हरेक कुरामा जति आमाको भूमिका हुन्छ त्यतिनै बुवाको पनि हुन्छ । भनिन्छ नि पितृदेवो भवः अर्थात् पिता भनेका भगवान हुन् ।
जसरी यो संसार देखाउनलाई आमाको भूमिका हुन्छ, त्यसैगरी पिताले पनि आफ्ना सन्तानलाई यस संसारमा ल्याउन र उनको उज्ज्वल भविष्य बनाउन सधैं प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । कहिले अभिभावक बनेर, कहिले असल शिक्षक बनेर, कहिले साथी बनेर र कहिले प्रेरणाको स्रोत बनेर हरेक पिताले आफ्ना छोराछोरीको भविष्यलाई सफल बनाउन लागिपरेका हुन्छन् ।
“हामी आफ्ना बुवाआमाका भौतिक, भावनात्मक, जैविक अनि सपनाका अंशहरुका शिवाय अरुकेही पनि हैनौँ, हामीमा वगेको रगत, अडेको सँस्कार र गढेका सपनाहरु हाम्रा मातापितवाट धेरैनै नजिक हुन्छ, ति सपना र संभावनाका प्रदायक, जिवन श्रृष्टीकर्ता चराचर जगतका सम्पूर्ण आदर्श वूवाहरुलाई स्मृती ।”
हामी हिन्दु धर्मावलम्बीले मनाउँदै आइरहेका चाडपर्व सबै पर्व धार्मिक, साँस्कृतिक, परिवारिक र सामाजिक परम्पराका छन् । कुनै पर्व आमाको लागि विशेष, कुनै गुरुका, कुनै दाजुभाइका, कुनै दिदीबहिनीका सम्झना गर्न विशेष छन् । त्यस्तै, बुवाको सम्झना गर्नका लागि पनि भोलिको दिन महत्वपूर्ण मानिन्छ । हुन त बुवालाई माया गर्न वा बुवाको सम्झना गर्न कुनै दिन विशेष चाहिँदैन । यो प्रेम अटुट नै रहन्छ । तर, हिन्दु सनातन धर्म मान्नेले हरेक वर्षको भाद्र कृष्णपक्षको औंसी तिथिलाई पिताको मुख हेर्ने दिनको रुपमा मनाउने परम्परा छ ।
यस दिनमा पिताको भौतिक उपस्थिति हुने छोराछोरीले उनको मुख हेरेर मिठाई, फलफूल, कपडा आदि उपहार दिने र परदेशमा हुने छोराछोरीले फोनबाटै पनि कुरा गर्दछन् । औंसी तिथिहरुलाई विशेष गरेर पितृको सम्झना गर्न पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।